पति होस् त प्रचण्ड जस्तो ! - Everest Dainik - News from Nepal
दिननिशानी मगर । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोहोरी गीत गाउनका लागि म्याग्दीको बेनी गएका थिएनन् । गायक खड्क गर्बुजाको एउटा गीत छ : ‘जाउँला पाखापानी मामाको छोरी लिनलाई ।’ पाखापानी पनि म्याग्दी जिल्लामै पर्दछ । र पक्कै पनि श्रीमती नैनकला थापासँगै गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत मामाको छोरी लिनलाई म्याग्दी बेनी गएका हैनन् होला ।
भुँडी नभएको नेपाली को छ ? पेट नभएको नेपाली कोही छ ? तर यहाँ प्रचण्ड र बादलको भुँडी देखेर जगतै हाँसेको छ, मानौं कि भुँडी संवेदनशील अङ्ग हो । अरे बाबा ठाकुरे नि, कोट र पाइन्ट लगाएर पौडी खेलिन्न क्या । प्रचण्ड र बादल ‘सिक्स प्याक बडी’ देखाउन, आफ्नो सेक्सी फिगर देखाउन माथिल्लो हरको लुगा सर्लक्कै फुकालेका हैनन् नि । त्यो तातोपानी कुण्डको व्यवस्थापन समितिको नियम नै कडा ।
बरू म्याग्दी जिल्लाको हकमा पर्यटनको प्रचार भएको छ । हुन त म्याग्दी आफैंमा सुन्दर जिल्ला हो । तातोपानी कुण्डको पनि प्रचार भएको छ । लाजिम्पटको मसाज सेन्टर र स्टीमबाथहरूमा लाखौं खर्चने पेट्टी बुर्जुवाहरूले सीता दाहाल तातोपानी कुण्डमा डुब्दा धेरै खिसीटिउरी नगरे नि हुन्छ ।
बुख्याँचाहरूले जेजस्ता झूटा प्रचार गरेपनि प्रचण्ड परिवर्तनको सिङ्गो तस्वीर हो । हो, त्यो बुख्याँचा म पनि हुन सक्छु । चोखो चोर बन्न हँुदैन । तर प्रचण्डको मनोबल गिराएर यो देशको मनोबल माथि उठ्छ भन्ने कुरा दिवास्वप्न मात्र हो ।
शायद उनीसँगको अन्तिम राजनीतिक संवाद पनि यही थियो । हुन त हामी को हौं र राजनीतिक संवादको अर्थ, तर सामान्य नागरिकको हैसियतले प्रचण्डको सचिवालयका एक जिम्मेवार सदस्यसँग दोहोरो संवाद गर्न पाउनु मेरा लागि पनि अर्थपूर्ण विषय थियो ।
अमेरिकी एजेन्सीहरू तिब्बती सिमानामा क्यामरा जडान गर्न चाहन्थे, कथित जलवायु परिवर्तनको नाममा । तर चीनसँगको हाम्रो एक चीन नीति अनि सुरक्षाको हिसाबले त्यो गलत ठहरिन्थ्यो ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड भन्छन्, ‘समाजवाद र साम्यवादको यात्रा लामो हुन्छ’
तपार्इं संसारभरि हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको पनि निजी जीवन हुन्छ । र निजी जीवन भनेको पारिवारिक वा अनौपचारिक जे पनि हुन सक्छन् । पुटिन घोडा चढ्न रुचाउँछन् । बाराक ओबामा समुद्रमा आफ्नै लुगामा कैयौंपटक मस्ती गर्न पुगेका थिए, त्यतिखेर उनी राष्ट्रपति थिए ।
प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन हुनुभन्दा करीब १५ दिन अगाडि हाम्रो भेट भएको थियो । त्यो भेट नै अन्तिम हुन पुग्यो । त्यसपछि हामी दाजुभाइबीच भेट भएन, कहिलेकाहीँ सपनामा बाहेक । विपनामा चाहिँ नयाँपुराना संस्मरणहरू गिदीमा सल्बलाउँछन् । तर हामी दाजुभाइ परेवाको जोडीजस्तो पनि थिएनौं, कुकुर बिरालो जस्तो पनि थिएनौं । एकअर्काको आलोचना, सबल र दुर्बल पक्षका विषयमा हामी आमनेसामने नै बाझाबाझ गर्थ्यौं । तर मनमा इख लिने काम हुँदैनथ्यो ।
अनि के सेनाको हेलिकप्टरमा नगए बयलगाडामा चढेर जानु त ? साइकलमा जान सम्भव नै छैन । अनि के सेनाको हेलिकप्टर रामदेवले योगा सिकाउन आउदा मात्र प्रयोग गर्ने हो र ? या भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एस्कर्टिङमा मात्र प्रयोग गर्ने हो ? हेलिकप्टरले बिरामी सीता दाहाल र परिवारजनलाई लग्यो, ल्यायो । सुनको अण्डा कोरलेर त बसेन होला ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड आज भारत प्रस्थान गर्दै, को-कोसँग हुनेछ भेटवार्ता ?
सेनाको हेलिकप्टर चढेर किन गए भन्ने कुरा छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा गएको होला । भारतको, चीनको हेलिकप्टरमा गएको त हैन होला । फेरि हेलिकप्टर गोरु हैन, खेत जोतेर बस्ने, आकाशमै उड्ने हो । बिरामी लिएर गएको हो । त्यहाँ साथमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि सँगै गएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं छन् ।
भुँडी नै त्यत्रो छ त के गर्ने । काटेर फाल्न मिलेन । लुगासँगै पौडिन पनि मिलेन । भुँडी भनेको बेलुन जस्तो खुम्च्याउने र फुलाउने जिनिस पनि हैन । बरू बादलले कालो टोपी नलगाएको भए हुने, बरू क्याप लगाएको भए हुने । तर सवाल यो हो कि प्रचण्डको भुँडीले किन देश हल्लायो ?
अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त छैनन् तर राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा भने अवश्य छन् । तर प्रकाशको अभावमा उनको दैनिकी प्रभावित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जस्तो कि, सामाजिक सञ्जालमा नराख्दा पनि हुने तस्विरहरू आइरहेका हुन्छन् । हाई प्रोफाइल मेनटेन गर्ने सवालमा हालको सचिवालय चुकेको छ । तर प्रयासहरू भने भइराखेका छन् । यस्ता विषयमा छोरी, ज्वाईंहरू भन्दा पनि इमान्दार नेता, कार्यकर्तालाई प्रचण्डले विश्वास गर्नुपर्छ र वरिपरि राख्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।
अहिलेको सचिवालय केवल कामचलाउ सरकार जस्तो हो । काम त चलाएको छ तर सोचेअनुसारको पर्फर्मेन्स दिन सकेको छैन । सीता दाहालको उपचार र हेरचाहसँगै प्रचण्डले सचिवालयलाई पनि गतिशील बनाउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ । बट डन्ट वरी ! लोकान्तर डटकमबाट साभार
ट्याग्स: Dilnishani Magar, Prachand, sita dahal